स्मार्ट सिटीको सपना | चितवन पोष्ट
हिजो यसै दैनिकमा स्मार्ट सिटीका लागि भरतपुर महानगरमा घरधुरी सर्वेक्षण थालनी भएको खबर सार्वजनिक भयो । यस खबरमात्रले पनि समग्र चितवनवासीमा आशाको सञ्चार गराएको छ । स्थानीय तहको चुनावताका निकै चर्चामा आएको स्मार्ट सिटीको सपना पूरा गर्न निकै चुनौती छ । तथापि सहरी विकास मन्त्रालयले भरतपुर महानगरसहित देशका २० वटा सहरलाई स्मार्ट सिटी बनाउन गृहकार्य सुरू गरेर सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरेको छ । नेपालको परिप्रेक्ष्यमा स्मार्ट सिटी नौलो परिकल्पना हो । ठाउँठाउँमा सार्वजनिक शौचालयको सुविधा, धूलोमैलो र फोहोर व्यवस्थापन, प्रदूषणरहित वातावरण, व्यवस्थित सहर, सुरक्षित भवन, पार्किङ, हरेक क्षेत्रमा प्रविधिको प्रयोग, भीडभाड र झन्झटबिना सेवा खरिद गर्न पाउने सुविधा आदि विशेषतायुक्त सहरलाई स्मार्ट सिटी भनिन्छ । विकसित मुलुकका लागि यस्ता आधारभूत कुरा सामान्य हुन् । स्मार्ट सिटीका लागि सर्वप्रथम भौतिक संरचना व्यवस्थित हुनुपर्छ । दीर्घकालीन निर्माण, सञ्चार र अत्याधुनिक बजार चाहिन्छ । आधुनिक सहरका लागि आवश्यकीय सम्पूर्ण विषय समावेश भएको हुनुपर्छ । जहाँ सूचना प्रविधिलाई प्राथमिक पूर्वाधारका रुपमा लिइन्छ ।
स्मार्ट सिटीमा अटोमेटिक सेन्सर र डाटा सेन्टरसमेत समावेश गरी यसैमार्फत महानगरवासीलाई सेवा दिइन्छ । अझैसम्म हाम्रा सडक र यातायात सेवा भद्रगोल र गञ्जागोल छन् । सबैभन्दा बढी चुनौती सवारी व्यवस्थापनमा हुने भएकाले अटोमेटिक ट्राफिक संकेत हुनुपर्छ । जस्तोसुकै समस्या पनि स्वचालितरूपमा समाधान गर्ने संयन्त्र चाहिन्छ । यस्तो सिटीमा निजीभन्दा सार्वजनिक सवारीसाधनलाई प्राथमिकता दिइएको हुन्छ । त्यो पनि विद्युतीय सवारीसाधन । सूचना प्रविधिको यति धेरै प्रयोग हुन्छ कि कुनै सवारी दुर्घटना भएमा एउटा स्वीच थिचेपछि उद्धार कार्य सुरु हुनुपर्छ । सहरका हरेक कुनामा सीसीटिभी क्यामेरा जडित हुन्छन्, जहाँ कन्ट्रोल रुममा बसेरै समग्र सहरको गतिविधि निगरानी गर्न सकियोस् । अर्को विशेषता भनेको डाटा सेन्टर हो, जहाँ सहरबारे हरेक सूचनाहरु उपलब्ध हुनेछन् । जसको सहायताबाट अपराधीको सजिलै पहिचान हुनेमात्र होइन विगतमा भएका अपराधबारे जानकारी लिन सकिन्छ । अहिले देशभर हत्या, हिंसा र बलात्कारका घटना बढिरहेका छन् । संदिग्ध अपराधीहरु पत्ता लगाउन कठिन भइरहेको अवस्थामा सिस्टमबाटै अपराधीलाई नियन्त्रणमा लिएर कारबाही गर्न सकिनेछ ।
स्मार्ट सिटीको अर्को विशेषता टेली उपचार सेवा हो, जहाँ डाक्टरलाई घन्टौँ कुरेर स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपर्ने झन्झटबाट मुक्ति मिल्नेछ । घरमै बसेर विशेषज्ञ उपचार हासिल गर्न सकिनुका साथै साँझबिहान जुनसुकै बेला पनि हिँडडुल गर्न सहज र सुरक्षा हुनेछ । स्मार्ट सिटीका लागि ठूलो चुनौती सहरको फोहोर व्यवस्थापन हो । यो प्रविधिको प्रयोगबाट सहरमा थुप्रिएको फोहोर महिनौँ थुप्रिने समस्या हट्नुका साथै डम्पिङ साइट पनि अत्याधुनिक हुनेछ । महानगरमा अझैसम्म सुन्दर हरियाली पार्क छैन । वातावरणमैत्री र प्रदूषणरहित सहरको परिकल्पना नगरी स्मार्ट सिटीको सपना पूरा कठिन छ । नाला र ढलको व्यवस्थापन नगरी, शुद्ध पानीको पर्याप्तता पूरा नगरी, मानवअनुकूल वातावरण सिर्जना नगरी स्मार्ट सिटी बन्दैन । हातहातमा मोबाइल पुग्दैमा जनता स्मार्ट हुँदैनन् । सडकको कुनतर्फ हिँड्ने ? कहाँबाट बाटो काट्ने ? भन्नेसम्म चेतना नभएका मानिसको सहर हो यो । त्यसैले सूचना, सञ्चार र प्रविधिको प्रयोगका साथै मानिसको सोच स्मार्ट बनाउनुपर्छ । हरेक क्षेत्रमा हुने ढिलासुस्ती, कुशासन, घूसखोरी, अटेरी, बलमिच्याइँ, ठगी र अपराध न्यूनीकरणका लागि स्मार्ट सिटीको गृहकार्य हुनु स्वागतयोग्य छ । न्यूनतम पूर्वाधार विकास गरी सूचना प्रविधिमार्फत काम कारबाही हुनसके हाम्रा लागि त्यो नै ‘स्मार्ट सिटी’ हुनेछ ।
सावोमीको मी ८ लाइट बजारमा